I-10 YEEMBADADA ZESIKHUMBA EZIBALASELEYO KUMADODA NGO-2021 - UHLOBO
I-10 yeembadada zesikhumba eziBalaseleyo kuMadoda ngo-2021
Akusiyo imfihlo ukuba indoda nganye kufuneka ibe neentlobo ezahlukeneyo zezihlangu ukuba zikhethe, njengoko kubalulekile ukuba nesihlangu esifanelekileyo okanye imbadada yesiganeko esifanelekileyo. Kwaye ngelixa iimbadada ziwela kwicala eliqhelekileyo lesikali sezihlangu, awunyanzelekanga ukuba uzinze kwiiflops zexabiso eliphantsi zerabha xa kufikwa kwizihlangu ezishushu-zemozulu.
Ngapha koko, iimbadada zesikhumba zinokunxitywa phezulu okanye ezantsi kuxhomekeke kumnyhadala okanye umsitho, kwaye enyanisweni inokunika isinxibo esingaqhelekanga ngenye indlela ephucukileyo kodwa ebuyileyo egqibeleleyo ngeempelaveki, ngeholide, okanye ukuphuma emini. Ukusuka kwiiklasikhi ezinje ngeBirkenstocks kunye neembadada zendlela yabalobi ukuya kwiimbadada zesikhumba eziza kukwenza uzive ngathi uhanjiswe kwiholide zasehlotyeni zaseYurophu zamaphupha akho, nazi iimbadada zesikhumba ezili-10 ezilungileyo zamadoda.
1. I-Birkenstock Arizona Iibhanti ezimbini zomtya wesikhumba
Ukuba ukhangele iimbadada ezingezizo iiflip zakho eziqhelekileyo, emva koko iBirkenstock Arizona Iibhanti ezimbini zemitya yesikhumba zizimbadada ezifanelekileyo kuwe. Ezi Birkenstocks zinemitya emibini egudileyo yesikhumba ngapha nangapha okuphezulu, ilogo ebhalwe ilogo, kunye ne-EVA eyenzelwe yonke imihla yokuthuthuzela kunye nokuqina.
Ukuqala ukwaziswa ngo-1973, ezi mbadada zesikhumba zodaka ziya kongeza ihippie kwi-wardrobe yakho, kwaye ijongeke kakuhle xa ubhangqiswe ngempahla eqhelekileyo. Zama ukuzinxiba ngeebhulukhwe zelinen ezipholileyo kunye neqhosha elifutshane lemikhono phantsi ukuze ujonge ukuphola, ukubukeka okungagqibelelanga okufanelekileyo nakuphi na ukuphuma kwemini ngempelaveki.
2. Iibhotile zesikhumba zeBottega Veneta Vienna
Iimbadada akufuneki zikhangeleke ukuba ziyadika okanye zingaqhelekanga, kwaye iBottega Veneta Vienna Leather Sandals ziyayingqina loo nto. Yenziwe ngesikhumba sase-Italiya, imitya yezi zeembadada inepateni enqabileyo eyahlukileyo eya kuthi inxibe nayiphi na imbonakalo engaqhelekanga ngephanyazo, kunye nesikwele kunye ne-logo-embossed insole yomphathi ococekileyo nobukekayo. Kuba ezi mbadada zesikhumba zikwicala lokudressa, kungcono ukuzidibanisa ngokwahlula-hluliweyo, njengama-chinos abophelelwe kanye emaqatheni, iqhosha elifutshane okanye elide elinomkhono oqinileyo ezantsi, kunye nebhanti emnyama yesikhumba yokubopha ukujonga konke kunye.
3. UGrenson Florin Sandal
Ukuba awuzange ucinge ukuba iimbadada zingaphazama kwicala lomhleli, ke ndilapha ukukuxelela ukuba awulunganga, mhlobo wam. Iimbadada zeGrenson Florin zezona mbadada zimbadada zintsimbi zilungileyo zigqibezayo nasiphi na isinxibo, enkosi kwezi zimbini, imitya yesikhumba esityebileyo sethole ngapha nangapha, i-buckles zesilivere, kunye neenyawo zokubumba ezinokugcina ukhululekile, upholile kwaye womile imini yonke .
Nxiba ezi ntsana zineebhotile ezimnyama ezifakiweyo- ijean, joggers, okanye ii-chinos zisebenza kule meko-kwaye ngaphezulu kunye ne-tee emnyama emnyama kunye ne-black beanie ye-ultra-cool, edgy vibe efanelekileyo yokuchitha kusasa kwivenkile yekofu, ukuthatha inja yakho ukonwabela ukuhamba impela-veki, okanye ujonge ngaphandle kunye nama buds akho.
4. UGqr Scholl's Gaston Isikhumba seembadada
ukulwa i-irish tattoo edolophini
Iimbadada zendlela yabalobi ziyabuya, kwaye kwabo bafuna zombini isitayile kunye nentuthuzelo, musa ukujonga ngakumbi kunoGqr.Scholl's Gaston Leather Sandals, ezijonga zonke iibhokisi xa kufikwa kwifashoni, intuthuzelo, kunye nokuqina. Yenziwe nge-100% yesikhumba kwaye igqityiwe ngerabha yodwa, ulwelwesi lwe-neoprene, umtya onokuhlengahlengiswa, kunye nenkumbulo ye-foam insole, kukho isizathu sokuba leembadada zikaGqr.Scholl zimbalasane bezithandwayo okokoko baqala ukubetha ezishelfini ngo-1968.
Ibhonasi: Abaphononongi abaninzi bathi ezi zincedile kwi-fasciitis ye-plantar, ke kwabo baneengxaki zeenyawo, ezi mbadada zesikhumba zinokuba ngumsindisi-nangona, ngokucacileyo singabasebenzi bezonyango, ke qiniseka ukuba ujonge ugqirha wakho ukuba unemibuzo malunga izihlangu zasekunene zezifo zakho ezithile.
5. Iimbadada zamandulo zamaGrike uApollonas Iimbadada zesikhumba
Ukuba uzingela iimbadada zeembadada zesikhumba zokuphuma ngeempelaveki okanye ikhefu elifudumeleyo lemozulu, emva koko iiSandals zamandulo zamaGrike uApollonas Isikhumba seembadada bekufanele ukuba bekukho egumbini lakho izolo.
Yenziwe ngesikhumba esingenamichiza kwelebheli yemveli yaseGrisi, ezi mbadada zibonisa imitya edityanisiweyo, insole elahliweyo yelogo, into yokufaka irabha yokuthintela isiliphu, kunye nesosi esiphakamileyo kancinci, esinceda ukufunxa - okuthetha ukuba uya kukhululeka njengesihogo imini yonke. Nxiba la makhwenkwe mabi aneebhulukhwe ezimfutshane kunye neqhosha lemikhono elifutshane phantsi okanye iti esisiseko yokufota, ukubukeka okungaqhelekanga, kunye nomphezulu ngomnqwazi womququ ukuba uza kuba selangeni imini yonke.
Bona ngakumbi malunga - I-10 yeFlip Flops ehamba phambili yamadoda ngo-2021
6. Iimbadada zikaOlukai Hokule
Ukuba ungaphezulu kweflip flop uhlobo lomfana, kuya kufuneka ujonge iiSandals zika-Olukai Hokle, ezibonisa i-outsole eyenziwe ngofele olupheleleyo lweenkozo zerabha zokubambelela kunye nokuguquguquka, i-EVA midsole yoxinzelelo. umtya onika ukhuseleko olufanelekileyo, kunye nenkxaso yokugqibela yeArch. Ezi mbadada zinxitywa ngokufanelekileyo ngezambatho ezingaqhelekanga, ezinje ngeebhulukhwe ezimfutshane kunye nehempe emfutshane enemikhono- akufuneki unxibe iiflops nakweyiphi na imeko ngaphandle kwesiqhelo, ke yigcine engqondweni xa usenza oku.
7. UJohnston noMurphy Norris uMboniso
Iimbadada zesilayidi wonke umsindo, kwaye azizukuphuma kwisitayile nanini na kungekudala. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba izilayidi zihlala zinxulunyaniswa nembaleki ayithethi ukuba awungekhe ubambe iperi eya kuthi ikhethe ukubonakala kwakho kwemihla ngemihla. Ngena kwisilayidi sikaJohnston noMurphy Norris esenziwe ngesikhumba esineenkozo ezipheleleyo, sinejerber yodwa, kunye ne-EVA midsole engasindi yokuqinisa kunye nokuthuthuzela imini yonke. Nxiba ‘em ngee-chinos ezinombala okhanyayo, ibhulukhwe yelinen, okanye iibhulukhwe ezimfutshane ezifakiweyo ezibetha kanye apha ngasentla okanye ngaphezulu kwedolo, kwaye ubhangqe ngeqhosha elifutshane elishicilelweyo lemikhono ezantsi yengubo yebrunch efanelekileyo yempelaveki.
8. Iimbadada zikaNisolo Huarache
Ngamanye amaxesha, kufuneka nje ubeneembadada ezimbini eziphindwe kabini njengezihlangu, kwaye kulapho iiNisolo Huarache Sandals zingena khona. La makhwenkwe mabi alukiwe ngesandla avela kumgangatho ophezulu wesikhumba, aphefumla ngokukhawuleza, kwaye anokunxitywa phezulu okanye ezantsi, ngenxa yoyilo olulula kodwa oluhle.
Ukuba ucwangcisa ukubanxiba, babhangqe ngokunxiba okuqhelekileyo, njengama-chinos, iqhosha elisezantsi, kunye nengubo yezemidlalo ukuba imozulu okanye ithuba liyavuma; ukuba ufuna ukubukeka okungaqhelekanga, iifutshane ezifakiweyo kunye nomphezulu oqhelekileyo kufuneka wenze iqhinga.
9. I-UGG Wainscott Buckle Slide Sandal
Inyaniso encinci eyaziwayo: I-UGG ayivelisi nje iibhutsi zasebusika ezifanayo kunye namantombazana angama-2000 angama-sorority; i-brand inene inezinto ezininzi onokukhetha kuzo xa kufikwa kwizihlangu ezentofontofo, kwaye i-UGG Wainscott Buckle Slide Sandal isitayile ekungafanelekanga ukuba usigqithe.
Yenziwe nge-100% yesikhumba kunye noyilo olukhumbuza ukutyikitywa kweBirkenstocks 'iimbadada ezinemitya emibini, ezi mbadada ze-UGG zikwabonisa irabha yodwa, i-buckles zentsimbi, kunye ne-foam-density foam footbed yokufumana intuthuzelo ephezulu. Ezi ntsana ziyafumaneka kwi-cognac okanye emnyama yakudala, ke ngoko unokufumana umbala ogqibeleleyo wokutshatisa isitayile sakho.
10. UPaul Smith Phoenix utyikityo lweStray Trim Iimbadada zesikhumba
Kulabo bafuna isanti yeembadada zesikhumba kunye ne-pizazz kubo, i-Paul Smith Phoenix Signature Stripe Trim Leather Sandals iya kuba yindlela yakho entsha oyithandayo yezihlangu ngenxa yokubamba kwabo amehlo, ukusayina imibhobho enemibala emininzi. Yenziwe ngesikhumba esicocekileyo kwaye inebhedi ebunjiweyo ye-EVA kunye nokunyathela irabha yodwa, ezi mbadada zesikhumba zilungele ukunxiba mihla le kwaye ziya kongeza imeko yesitayile esahlukileyo kuyo nayiphi na into onxibe ngayo.
Ukubonakala okuncinci, phantse ukubonakala kwe-monochromatic, nxiba konke okumnyama ukuze imibhobho enemibala emininzi ime ngaphandle.
Bona ngakumbi malunga - Izihlangu ezi-17 eziPhezulu zePhenyane eziPhezulu zaMadoda-Imilenze yoLwandle yaseSitayile
Zithini izibonelelo zeembadada zesikhumba?
Iimbadada zesikhumba zingaphezulu kokuthanda nje, izihlangu eziqhelekileyo, ezikhululekileyo. Iimbadada zesikhumba zihlala zenziwe ngokuzinza kunye nentuthuzelo engqondweni, kwaye xa zigcinwa ngokufanelekileyo, zinokuhlala iminyaka kunye neminyaka- nokuba lixesha lokuphila. Ithwathwa yinto ekhusela umzimba kwaye kulula ukuyicoca.
Zahluke njani kwezinye iimbadada?
Iimbadada zesikhumba zahlukile kwezinye iimbadada, ezinje ngeerabha, ngeendlela ezahlukeneyo. Okokuqala, banikezela ngokhuseleko ngakumbi kwaye bahlala bomelele ngakumbi kunesibini esinexabiso eliphantsi ngerabha ezinokuthi uthabathe naphina.
Iimbadada zesikhumba nazo zinokunxitywa kancinci kwaye zinokunxitywa kwiminyhadala engaqhelekanga okanye ehlakaniphileyo, ngaphandle kokwenza ubonakale ngathi uvele nje ebhedini kwaye ubambe into yokuqala onokuyifumana ngaphambi kokuba uphume ngomnyango. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba naluphi na uhlobo lweembadada, isikhumba okanye akunjalo, akufuneki lunxitywe kumnyhadala osesikweni okanye umsitho, ke qiniseka ukuba ujonga ikhowudi yokunxiba ngaphambi kokuba ubethe isikhumba sakho osithandayo.
Iimbadada zesikhumba zihlala zibiza kakhulu kunabalingani bazo berabha, esiya kuthi sifike ngezantsi.
Ufanele uhlawule malini ngeembadada zeembadada?
Izihlangu zesikhumba ezifanelekileyo ziya kukuxabisa ubuncinci i-100 leedola, kwaye ezinye zibini ziya kubiza ngaphezulu kwe- $ 300-nangona kunjalo, kuba iimbadada zesikhumba zinokuhlala iminyaka ukuba zikhathalelwe ngokufanelekileyo, zilulungele ngokupheleleyo utyalo-mali.
mnyama namhlophe ii-phoenix tattoos
umbala omnyama nobomvu uyilo loyilo
uyilo oluncinci lwe-owl elula
Yintoni oza kuyibeka eludongeni niche